ထောငျကလှတျလာပွီးနောကျ လမျးဘေးမှာ အထညျလေးတှရေောငျးနကွေတဲ့ မဟာတနျး CDM ကြောငျးသားလေးမြား – Maythadin
ထောငျကလှတျလာပွီးနောကျ လမျးဘေးမှာ အထညျလေးတှရေောငျးနကွေတဲ့ မဟာတနျး CDM ကြောငျးသားလေးမြား
May Thadin | December 23, 2021 | News | No Comments
ကြှနျတျောလညျး MSc နဲ့ ၂ဘှဲ့ရပွီးပါပွီ။ သူတို့လေးတှလေညျး ဂုဏျထူးတနျး မဟာတနျးတှကေပါ။ ကြှနျတျော Oct 19 ထောငျကပွနျလှတျလာပွီးထဲက Unemployment ဖွဈနတေယျ။ ကြောငျးသားတှေ လညျးစိတျလစေိတျညဈနကွေပွီ ။ Moti ရအောငျ တခုခုတော့လုပျရမယျပေါ့။
အပွငျမှာဘယျသူတှေ ဘာလုပျနလေဲဆိုပွီးလလေ့ာနရေငျး Vintage အထညျ တှခေတျေစားလာတာတှေ့ တယျ။ Page လေးထောငျ ကြောငျးကဂြူနီယာလေးတှနေဲ့ စမျးလုပျမယျဆိုပွီး Dec5မှာတိုငျပငျပွီး အစီအစဉျစှဲအကောငျထညျဖျောကွတယျ။
စီစဉျနရေငျးဆေးကြောငျးကအဈမတှေ၊ စီးပှားရေးတက်ကသိုလျကအဈမတှေ Vintage အထညျတှေ ထရောငျးတာတှတေ့ော့ ပိုပွီအားတကျသှားတယျ။ ပိုပွီးတော့လညျး လုပျခငျြသှားတယျ။ Pageလေးမှာ တငျတော့ အားပေးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့အားမရကွသေးဘူး။
အဲ့တော့…. အခုလိုခရြောငျးကွမယျ ။ လုပျရဲလားလို့….တိုငျပငျလိုကျတော့ သူတို့တှကေလညျး အခကျအခဲ တှကေို အခှငျ့အလမျးအဖွဈပွောငျးလဲခငျြကွတဲ့သူတှဆေိုတော့ အားလုံးကသဘောတူကွတယျ။ လုပျကွ မယျဆိုပွီး… ရဲဆေးတငျကွတာပေါ့။ ဈေးမှာ ခရြောငျးဖို့…. မရှကျဘူးလား။ ဘာညာမေးတဲ့သူတှလေညျးမေးကွတာပေါ့။
တဈခြိနျကရြငျ အဲ့လို အလုပျလုပျရမှာမရှကျဘူးလားမေးတဲ့သူတှကေဘဲ ပိုကျဆံလာလာ ခြေးကွတာဘဲလေ အသကျမှေးဝမျး ကွောငျးအလုပျကတော့ ဆနျ့ကငျြဘကျကွီးကိုပွောငျးလဲသှားတာပေါ့။ ၇နှဈတာရငျးနှီးခဲ့ပွီး မကျခဲ့တဲ့တက်ကသိုလျဆရာလညျးမလုပျဖွဈတော့ပါဘူး။
ဒီခြိနျမှာ နိုငျငံခွားထှကျပွီး အလုပျလုပျဖို့ဆိုတာလညျး ခကျခဲသလို ကိုယျတိုငျကလညျး ထှကျသှားဖို့ ဆိုတာ လိပျပွာမလုံဘူးလေ။ တခြိနျတုနျးက ကျောလံကတုံးလကျရှညျကွီးဝတျပွီးကလေးတှရှေမှေ့ာ ကိုယျ့မွကေိုယျ့ရကေိုခဈြဖို့၊ ဂုဏျထူးတနျးတှေ မဟာတနျးတှေ ဝငျအောငျ ကွိုးစားဖို့၊ ပညာရေးမှာရငျးနှီးမွှပျနှံတယျဆိုတာအရှုံးမရှိဘူးဆိုတာတှကေို
အာဘောငျအာရငျးနဲ့ပွောခဲ့တာတှကေ ခနျ့ခနျ့ကွီးနဲ့ဆနျ့ဆနျ့ကွီးလဆေိုတော့…. ပွောခဲ့တာတှလေညျး လိမျရာမကအြောငျဒီအခြိနျက သငျခဲ့တဲ့ ပညာတှထေဲကလညျး Problem solving skill တှကေိုထုတျသုံးဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျဘဲလို့ထပျရှီးပါရစဦေး။ အတှအေ့ကွုံတှေ
ဘယျလောကျမြား မြားရှိပါစေ ပွနျလညျအသုံးခမြှုနဲ့ ပွနျလညျဆနျးစဈမှုမရှိဘူးဆိုရငျလညျး သငျယူခဲ့တာတှကေ Zero ဘဲဆိုတော့ အခုလို စမျးကွညျ့ကွတာပါ။ Something is better than nothing ပေါ့။ Environmental Studies အရ Vintage & Thrift အထညျတှသေုံးတယျဆိုတာလညျး သဘာဝပတျဝနျးကငျြပကျြစီးမှုကိုလြှော့ခဖြို့အတှကျရညျရှယျတာဆိုတော့
ကြှနျတျော့ရဲ့ Educational background ကိုလညျး support ဖွဈပါသေးတယျ။ Carriers ပွောငျးသှားပွီ ဆိုထဲက မတူကှဲပွားတဲ့ Field ကို လလေ့ာရတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ Priority Ideal Person တှေ ပွောငျးလဲပွီး စူးစမျးရတယျ။အခု ပဲခူးမှာဆို ဘယျသူ အောငျမွငျလဲ ဘယျသူ့ပုံစံအတုယူသငျ့လဲပေါ့။ ပဲခူးမှာတော့ June Nyein Thu ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးကို တကယျအားကတြယျ။ လေးလဲလေးစားတယျ။
သူ့ကို စသိတုနျးကတော့ သိနျးပေါငျးမြားစှာအလိမျခံရတာတောငျ သူ့အောကျကလူတှကေို တာဝနျယူ တာဝနျခံဖွရှေငျးပေးနိုငျခဲ့တဲ့ ဆယျကြျောသကျကောငျမလေးပေါ့။ အခုတော့ လေးစားရတဲ့ဆရာမကွီးဖွဈနပွေီ။ (အသိမပေးဘဲ sis အကွောငျးထညျ့ရေးမိလို့ sorry ပါ။)
ပွောခငျြတာက Carriers Field ပွောငျးလိုကျတော့မယျဆိုရငျ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ပုံစံ၊ ကိုယျစိတျကူးထားတဲ့ အိပျမကျတှအေရ လိုအပျခကျြတှေ နညျးနမူနာယူစရာတှကေိုပါပွောငျးလဲပွီးလလေ့ာရမှာပါလို့။
ကျွန်တော်လည်း MSc နဲ့ ၂ဘွဲ့ရပြီးပါပြီ။ သူတို့လေးတွေလည်း ဂုဏ်ထူးတန်း မဟာတန်းတွေကပါ။ ကျွန်တော် Oct 19 ထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီးထဲက Unemployment ဖြစ်နေတယ်။ ကျောင်းသားတွေ လည်းစိတ်လေစိတ်ညစ်နေကြပြီ ။ Moti ရအောင် တခုခုတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့။
အပြင်မှာဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်နေလဲဆိုပြီးလေ့လာနေရင်း Vintage အထည် တွေခေတ်စားလာတာတွေ့ တယ်။ Page လေးထောင် ကျောင်းကဂျူနီယာလေးတွေနဲ့ စမ်းလုပ်မယ်ဆိုပြီး Dec5မှာတိုင်ပင်ပြီး အစီအစဉ်စွဲအကောင်ထည်ဖော်ကြတယ်။
စီစဉ်နေရင်းဆေးကျောင်းကအစ်မတွေ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကအစ်မတွေ Vintage အထည်တွေ ထရောင်းတာတွေ့တော့ ပိုပြီအားတက်သွားတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း လုပ်ချင်သွားတယ်။ Pageလေးမှာ တင်တော့ အားပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အားမရကြသေးဘူး။
အဲ့တော့…. အခုလိုချရောင်းကြမယ် ။ လုပ်ရဲလားလို့….တိုင်ပင်လိုက်တော့ သူတို့တွေကလည်း အခက်အခဲ တွေကို အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲချင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ အားလုံးကသဘောတူကြတယ်။ လုပ်ကြ မယ်ဆိုပြီး… ရဲဆေးတင်ကြတာပေါ့။ ဈေးမှာ ချရောင်းဖို့…. မရှက်ဘူးလား။ ဘာညာမေးတဲ့သူတွေလည်းမေးကြတာပေါ့။
တစ်ချိန်ကျရင် အဲ့လို အလုပ်လုပ်ရမှာမရှက်ဘူးလားမေးတဲ့သူတွေကဘဲ ပိုက်ဆံလာလာ ချေးကြတာဘဲလေ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းအလုပ်ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးကိုပြောင်းလဲသွားတာပေါ့။ ၇နှစ်တာရင်းနှီးခဲ့ပြီး မက်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဒီချိန်မှာ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်း ခက်ခဲသလို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထွက်သွားဖို့ ဆိုတာ လိပ်ပြာမလုံဘူးလေ။ တချိန်တုန်းက ကော်လံကတုံးလက်ရှည်ကြီးဝတ်ပြီးကလေးတွေရှေ့မှာ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေကိုချစ်ဖို့၊ ဂုဏ်ထူးတန်းတွေ မဟာတန်းတွေ ဝင်အောင် ကြိုးစားဖို့၊ ပညာရေးမှာရင်းနှီးမြှပ်နှံတယ်ဆိုတာအရှုံးမရှိဘူးဆိုတာတွေကို
အာဘောင်အာရင်းနဲ့ပြောခဲ့တာတွေက ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ဆန့်ဆန့်ကြီးလေဆိုတော့…. ပြောခဲ့တာတွေလည်း လိမ်ရာမကျအောင်ဒီအချိန်က သင်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေထဲကလည်း Problem solving skill တွေကိုထုတ်သုံးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဘဲလို့ထပ်ရွှီးပါရစေဦး။ အတွေ့အကြုံတွေ
ဘယ်လောက်များ များရှိပါစေ ပြန်လည်အသုံးချမှုနဲ့ ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်း သင်ယူခဲ့တာတွေက Zero ဘဲဆိုတော့ အခုလို စမ်းကြည့်ကြတာပါ။ Something is better than nothing ပေါ့။ Environmental Studies အရ Vintage & Thrift အထည်တွေသုံးတယ်ဆိုတာလည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဆိုတော့
ကျွန်တော့်ရဲ့ Educational background ကိုလည်း support ဖြစ်ပါသေးတယ်။ Carriers ပြောင်းသွားပြီ ဆိုထဲက မတူကွဲပြားတဲ့ Field ကို လေ့လာရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Priority Ideal Person တွေ ပြောင်းလဲပြီး စူးစမ်းရတယ်။အခု ပဲခူးမှာဆို ဘယ်သူ အောင်မြင်လဲ ဘယ်သူ့ပုံစံအတုယူသင့်လဲပေါ့။ ပဲခူးမှာတော့ June Nyein Thu ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို တကယ်အားကျတယ်။ လေးလဲလေးစားတယ်။
သူ့ကို စသိတုန်းကတော့ သိန်းပေါင်းများစွာအလိမ်ခံရတာတောင် သူ့အောက်ကလူတွေကို တာဝန်ယူ တာဝန်ခံဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးပေါ့။ အခုတော့ လေးစားရတဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်နေပြီ။ (အသိမပေးဘဲ sis အကြောင်းထည့်ရေးမိလို့ sorry ပါ။)
ပြောချင်တာက Carriers Field ပြောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံ၊ ကိုယ်စိတ်ကူးထားတဲ့ အိပ်မက်တွေအရ လိုအပ်ချက်တွေ နည်းနမူနာယူစရာတွေကိုပါပြောင်းလဲပြီးလေ့လာရမှာပါလို့။
မွနျမာနိုငျငံ၏ ပထမဦးဆုံး ရှခြေိနျ (၁၇) ကပျြသားဖွငျ့ ပွုလုပျထားသညျ့ ရှလေကျထပျ စာခြုပျပါတဲ့ဗြာ..